Qaraxyo khasaare geystay oo ka dhacay Kismaayo
Labo qarax oo waaweyn ayaa xalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose kuwaasoo lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka KMG ah ee Jubba.
Qaraxyadan oo loo adeegsaday miinooyin la dhigay meelo kala duwan oo laga hagayey qalabka Remote Controlka ayaa waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan iney ku dhaawacmeen sadex askari oo ka tirsan maamulka Jubba.
Goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa waxaa ku dhowaa ciidamada maamulka Jubba oo ku howlanaa howlgalo ay ka wadeen qeybo ka mid ah magaalada Kismaayo si ay amaanka u sugaan.
Maamulka Jubba illaa hadda kama hadlin qaraxyadan hase ahaatee Kismaayo ayaa waxaa mudooyinkan ku soo badanayey qaraxyada iyo weerarada kale ee ka dhaca xiliyada habeenkii.
Al-Shabaab ayaa inta badan sheegata weerarada ka dhaca magaalada Kismaayo, iyadoo saraakiisha maamulka Jubba ay iyana had iyo jeer ku celceliyaan iney dedaal ugu jiraan sugida amaanka magaaladaas.